I-OPPO sele ivelise i-10x zoom yayo ngokusesikweni | I-Androidsis
UEder Ferreño | | Ukufota, MWC
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo ukuba kwakubhengeziwe ukuba I-OPPO isebenze kwitekhnoloji ye-10x ye-zoom technology ngaphandle kokulahleka komgangatho. Okokugqibela, xa kusenziwa i-MWC 2019, obu buchwephesha sele bunikiwe. Uphawu lwesiTshayina lubekwe e-Barcelona, ​​apho babesebenzisa khona intetho esemthethweni. Ke ukusebenza kwale teknoloji inomdla sele isaziwa, ethembisa ukuzisa inkqubela phambili.
Kwiveki ephelileyo kwabhengezwa ukuba i-OPPO izakuvelisa obu buchwephesha kwikota yesibini yalo nyaka. Ukuthathela ingqalelo oko sele ibonisiwe kwi-MWC 2019 Ngokusemthethweni, kujongeka ngathi imihla inokuba sengqiqweni. Yintoni esinokuyilindela kule teknoloji?
Uphawu lwaseTshayina lunalo yazisa uthotho lweziphuculo kule teknoloji. Ngale ndlela, ngokusetyenziswa kwehardware entsha, ukongeza ukwaziswa kuthotho lwemisebenzi emitsha, amava okusondeza aphuculwe kakhulu. Amava ethembiso lophawu alufani nantoni na esiyibonileyo kwii-smartphones. Ngaphandle kwamathandabuzo, inokuba yinkqubela phambili ebalulekileyo ye-OPPO.
Sifumana ukusondeza ukuya kuthi ga kwishumi ukwanda ngaphandle kwelahleko. Le yinto esiza kuyibona ngaphakathi kwi-smartphone. Ke ukubaluleka kwayo kukhulu. Kwaye emva kweeveki ngamarhe malunga nayo, iye yaseburhulumenteni kulo msitho ngaphambi kwe-MWC 2019 e-Barcelona. Nangona e-China ikwanomnyhadala wayo. Yintoni abasixelele yona ngale teknoloji?
I-OPPO 10x ukusondeza okubonakalayo
I-OPPO ifuna ukuqaqambisa indibaniselwano yesoftware kunye nezixhobo njengomba ophambili koku. Enkosi kuphuculo kumacandelo omabini, kuye kwafezekiswa obu buchwephesha. Inkampani ixhomekeke kwizixhobo abanazo ngoku kulawulo lwabo ukuze babenakho ukubazisa obu buchwephesha.
Inkqubo yesenzi kwifowuni isebenzisa inkqubo yelensi emile njenge-periscope. Imele ukuba nobukhulu obuncinci kakhulu, yi-6,6 mm kuphela, yiyo loo nto ivumelayo i-smartphone ayizukuqina ngokwendlela yoyilo. Into ebaluleke kakhulu kwi-brand, kwaye baye bakwazi ukufezekisa, njengoko besitshilo kumcimbi. Ke yinto ephambili, ekugqibeleni ukusebenzisa le teknoloji. Ukusukela ukuba kungenjalo, iprojekthi ngekhe iqhubeke.
I-10x Zoos engenaLoss kunye ne-Ultra-wide Angle ??? #GetCloserWithOPPO? pic.twitter.com/iJUIfD95f5
- OPPO (@oppo) Februwari 23, 2019
Kwelinye icala, i-120 yeedigri ebanzi sele isetyenzisiwe. Ukongeza kwi-sensor ephambili ye-MP eyi-48 kunye nenzwa yefowuni. Olu dibaniso luvumela i-OPPO ukuba igubungele ubude obugxile ukusuka kwi-16 ukuya kwi-160 mm. Nangona oku akuthethi ngokuthe ngqo ukuba kukho ukusondeza okubonakalayo kwe-10x kwisixhobo. Yindibaniselwano yesoftware kunye nezixhobo eziqinisekisa ukuba iifoto azizukuphulukana nomgangatho, into eyenzekayo kusondelo lwedijithali.
Ke luphuculo olukhulu kule ndawo. Indawo ukuza kuthi ga ngoku ibe yenye yeendawo ezibuthathaka kuninzi lweempawu ze-smartphone kwintengiso yangoku. Ukongeza, inkampani iqinisekisile ukuba zombini ikhamera ephambili, i-48 MP kunye nomnxeba, fika ngozinzo lwe-optical nge-OIS. Nangona i-angle-angle sensor ayinayo. Kodwa, kubonakala ngathi ayizukufuneka, njengoko besitsho kwi-OPPO. Ngenxa yohlobo lweefoto oluya kuthathwa kunye neekhamera.
Ngoku, kuhlala kuphela ukulinda ii-smartphones zokuqala ze-OPPO eziya kuthi zisebenzise le teknoloji ukufikelela kwintengiso. Kuthiwa oko enye yeyokuqala inokuba yiF11 Pro, apho sinezinto ezininzi ezivuzayo kwezi veki. Imodeli ekufuneka ifike kwintengiso kungekudala, nangona singenaso isiqinisekiso esisemthethweni ukuza kuthi ga ngoku. Inkampani ithethile iimodeli zayo zokuqala ziya kufika kwikota yesibini ukufumana le 10x zoom zoom. Kodwa khange basinike ulwazi oluthe kratya malunga nayo okwangoku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Ukufota » I-OPPO izisa ngokusesikweni i-10x zoom yayo
Lawula ishishini levenkile enkulu kwi-Idle Supermarket Tycoon